Yakachipa OEM simbi yekugadzira zvikamu zvemuchina zvikamu fekitori nevatengesi | Ouzhan
Nokuchengetedza zvikamu Stainless simbi
Izvo zvikamu zvikuru zvesimbi isina simbi ndeye kabhoni, chromium, nickel, uye zvimwe zvinoriumba zvinhu zvakaita se molybdenum, mhangura, uye nitrogen zvinowedzerwa. Iyo tsvuku punching maitiro ndeye epamberi inopisa kumanikidza kugadzira tekinoroji yakagadzirwa pahwaro hwekugadzira uye kupisa kupisa. Iko michina zvivakwa zvezvikamu zvinovandudzwa nekuchinja nzira yekugadzirisa. Iyo tsvuku kubaya maitiro inopisa simbi isina chinhu seyakanangana nekugadzira maitiro. Kuumba muforoma, kunze kwemahombekombe matsvuku akatsikirirwa, inowanzo kuumbwa panguva imwechete, nepo kuumbwa kwakaringana kuchiwanzo kuumbwa nematambudziko akati wandei.
Iyo tsvuku kubaya maitiro ine yakakura uye inosvika kure inoshanda inoshanda kune michina yekugadzira, zvigadzirwa zvemazuva ese zvigadzirwa, dziviriro, nzvimbo yemuchadenga uye zvimwe zvinoshandiswa. Semuenzaniso, mazhinji emuchina zvikamu senge injini dzedhiziri, matarakita, mota, zvombo, nezvimwe zvinokodzera kugadzirwa kwekutsva kubaya. Parizvino, iyo tsvuku punching maitiro anga achishandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwemazuva ese Hardware indasitiri, senge akasiyana mavhavha, pombi majoini, nzungu, nezvimwewo mupombi Hardware yakagadzirwa nemhangura tsvuku kubaya. Nezvayo zvisingaenzaniswi zvemhando yezvakanakira, zvave zvichitsiva zvigadzirwa zvakagadzirwa nekufa kwekukanda kana kukanda munguva yakapfuura. Ouzhan inopa yakagadziriswa masevhisi esimbi isina simbi yakatsvuka-yakarova zvikamu zvakagadzirwa zvevanokosha vatengi.
Zvakanakira Shanghai Ouzhan Stainless simbi ndokugadzira zvikamu
- Shandisa zvakajairika zvigadzirwa zvekugadzira, zviri nyore kuisa mukugadzira, inokodzera mabhizinesi madiki uye epakati
- Kubudirira kwepamusoro, kwakakodzera kugadzirwa kwemazhinji
- Iyo mega michina yezvitsvuku yekutsika zvikamu zvakanaka
- Natsiridza arambe achirema simbi uye kuvandudza ngura nemishonga zvikamu
- Inokodzera mhando dzese dzemavara kana dema simbi kugadzira
OEM zvemishini simbi isina kugadzirwa zvikamu zvekugadzirisa zvigadzirwa
Kushandisa Iwo mavhavha akasiyana, pombi majoini, nzungu, nezvimwe zveTonghonghong's pombi yemahara zvakatsiva zvigadzirwa zvakagadzirwa nekufa kwekukanda kana kukanda nezvakanaka zvisingaenzaniswi zvemhando.
Pashure: Yakasarudzika simbi isina simbi yakagadzira zvikamu zvemuchina zvikamu
Zvadaro: Sheet simbi zvikamu dzakakotama